Ngirozi Gabrieri Inoshanyira Mariya | Kutenda Kwechokwadi
“Tarirai! Murandasikana waJehovha!”
1, 2. (a) Mariya akakwaziswa sei nemunhu waakanga asingazivi? (b) Nei tingati Mariya aifanira kuita chisarudzo chinokosha?
MARIYA akatarisa achishamisika sezvo mueni aipinda mumba mavo. Haana kukumbira kuona baba vake kana amai vake. Akanga auya kuzomuona! Mariya akanyatsoziva kuti munhu wacho akanga asiri wemuNazareta. Muguta duku seraaigara zvaiva nyore kuziva munhu anenge ari mueni. Kunyange zvakadaro, uyu akanga akasiyana nevamwe vaeni. Akakwazisa Mariya nenzira isina kujairika, achiti: “Kwaziwa, iwe akanzwirwa nyasha kwazvo, Jehovha anewe.”—Verenga Ruka 1:26-28.
2 Nokudaro Bhaibheri rinotisuma nezvaMariya, mwanasikana waHeri, wokutaundi reNazareta raiva muGarireya. Nhoroondo yeBhaibheri pamusoro paMariya inotanga panguva yaakanga achifanira kuita chisarudzo chinokosha zvikuru. Akanga avimbiswa kuroorwa nomuvezi ainzi Josefa, murume akanga asiri mupfumi asi aiva nokutenda. Saka angangodaro akafunga kuti upenyu hwake hwaizenge husina twakawanda-wanda, achishanda somudzimai waJosefa kuti atsigirane naye, vachirera mhuri yavo pamwe chete. Zvisinei, akangoerekana atarisana nomueni uyu akanga auya kuzomuudza nezveropafadzo yaakanga apiwa naMwari, iyo yaizochinja upenyu hwake.
3, 4. Kuti tinyatsoziva Mariya, zvii zvatinofanira kusiyana nazvo, uye tinofanira kuisa pfungwa pachii?
3 Vakawanda vanoshamiswa nokuziva kuti Bhaibheri haritiudzi zvakawanda nezvaMariya. Rinotiudza zvishoma nezvemhuri, unhu hwake uye hapana parinotaura nezvechitarisiko chake. Asi zvinotaurwa neShoko raMwari nezvake zvinodzidzisa zvikuru.
4 Kuti tinyatsoziva Mariya, hatifaniri kungobvuma zvinodzidziswa muzvitendero zvakasiyana-siyana nezvake. Saka ngatisiyanei nekurondedzerwa kwaakaedza kuitwa nevakawanda. Ngatisiyaneiwo nedzidziso dzezvitendero dzakakwidziridza mukadzi uyu aizvininipisa nokumupa mazita okuremekedza akadai seokuti, “Mai vaMwari” uye “Mambokadzi Wedenga.” Panzvimbo pezvo, ngatiisei pfungwa pane zvinonyatsotaurwa neBhaibheri. Rinoita kuti tinzwisise zvakawanda nezvokutenda kwake uye kuti tingamutevedzera sei.
5. (a) Tingadzidzei nezvaMariya kubva pane zvaakaita paakakwaziswa naGabrieri? (b) Chidzidzo chipi chinokosha chatinogona kuwana pana Mariya?
5 Mueni waMariya akanga asingori munhu. Aiva ngirozi Gabrieri. Paakadana Mariya kuti “akanzwirwa nyasha kwazvo,” Mariya ‘akanetseka kwazvo’ nemashoko acho uye akashamisika nokukwaziswa nenzira iyi isina kujairika. (Ruka 1:29) Kunzwirwa nyasha kwazvo naani? Mariya aisatarisira kunzwirwa nyasha kwazvo nevanhu. Asi ngirozi yacho yaitaura nezvokunzwirwa nyasha naJehovha Mwari. Izvozvo zvaikosha kwaari. Kunyange zvakadaro, aisazviona seane nyasha dzaMwari. Kana tikavavarira kunzwirwa nyasha naMwari, tisingambozvioni setakatonzwirwa nyasha nechekare, tichawana chidzidzo chinokosha chakanyatsonzwisiswa naMariya. Mwari anoshora vanozvikudza, asi anoda uye anotsigira vakaderera uye vanozvininipisa.—Jak. 4:6.
Mariya aisazviona seane nyasha dzaMwari
6. Ngirozi yakaudza Mariya nezveropafadzo ipi?
6 Mariya aizofanira kuzvininipisa zvakadaro, nokuti ngirozi yacho yakanga yamuudza nezveropafadzo isingambofungidziriki. Yakatsanangura kuti aizobereka mwana aizova munhu anokosha kupfuura vanhu vose. Gabrieri akati: “Jehovha Mwari achamupa chigaro choumambo chababa vake Dhavhidhi, iye achava mambo paimba yaJakobho nokusingaperi, uye hapazovi nomugumo woumambo hwake.” (Ruka 1:32, 33) Chokwadi Mariya aiziva nezvevimbiso yakanga yaitwa naMwari kuna Dhavhidhi makore aipfuura chiuru akanga adarika yokuti mumwe wevazukuru vake aizotonga nokusingaperi. (2 Sam. 7:12, 13) Saka mwanakomana wake aizova Mesiya aitarisirwa kwemazana emakore nevanhu vaMwari!
Ngirozi Gabrieri yakaudza Mariya nezveropafadzo isingambofungidziriki
7. (a) Mubvunzo waMariya wakaratidzei nezvake? (b) Vechiduku mazuva ano vangadzidzei pana Mariya?
7 Chinotonyanya kukosha ndechokuti ngirozi yacho yakamuudza kuti mwanakomana wake ‘aizonzi Mwanakomana weWokumusorosoro.’ Mukadzi aiva munhu aizogona sei kubereka Mwanakomana waMwari? Chaizvoizvo, Mariya aizombobereka sei mwana? Akanga avimbiswa kuroorwa naJosefa asi akanga asati aroorana naye. Mariya akabvunza mubvunzo uyu zvakajeka achiti: “Izvi zvingaitika sei, ini zvandisiri kurara nomurume?” (Ruka 1:34) Ona kuti Mariya akataura nezveumhandara hwake asingatombonyari. Pane kunyara, aitodada kuti akanga achiri mhandara. Mazuva ano, vechiduku vakawanda vanoda chaizvo kurasa umhandara hwavo vomhanyirira kuseka vaya vanenge vachiri mhandara. Chokwadi pasi parohwa nenyundo. Zvisinei, Jehovha haana kuchinja. (Mar. 3:6) Sezvaaingoita mumazuva aMariya, achiri kukoshesa vaya vanochengeta mitemo yake yetsika.—Verenga VaHebheru 13:4.
8. Kunyange zvazvo Mariya ainge asina kukwana, aizobereka sei mwana akakwana?
8 Kunyange zvazvo aiva mushumiri waMwari akatendeka, Mariya aiva munhu asina kukwana. Naizvozvo, aizobereka sei mwana akakwana, Mwanakomana waMwari? Gabrieri akatsanangura kuti: “Mudzimu mutsvene uchaburukira pauri, uye simba roWokumusorosoro richakufukidza. Saka ichochowo chichaberekwa chichanzi chitsvene, Mwanakomana waMwari.” (Ruka 1:35) Utsvene hunoreva “kuchena,” “kuyera.” Kazhinji vanhu vanopfuudza kusakwana kwavo kuvana vavo. Zvisinei, mumamiriro ezvinhu aya, Jehovha aizoita chishamiso chakasiyana nezvimwe. Aizotamisa upenyu hweMwanakomana wake kubva kudenga achihuisa mudumbu raMariya obva ashandisa simba rake rinoita basa, kana kuti mudzimu mutsvene, “kufukidza” Mariya, zvichidzivirira mwana wacho kuti asatombosvibiswa nechivi. Mariya akabvuma zvakavimbiswa nengirozi here? Iye akatii?
Mhinduro yaMariya Kuna Gabrieri
9. (a) Nei vakawanda vachirasika pakusava nechokwadi nezvenhoroondo yaMariya? (b) Gabrieri akasimbisa sei kutenda kwaMariya?
9 Vakawanda, kusanganisira vanhu vanodzidza nezvechitendero vechiKristudhomu, vanoomerwa chaizvo nokudavira kuti mhandara ingabereka mwana. Pasinei nokudzidza kwavo kwose, vanotadza kunzwisisa chokwadi chisina kuoma. Sokutaura kwakaita Gabrieri, “kuna Mwari hapana chinoziviswa chichava chisingabviri.” (Ruka 1:37) Mariya akabvuma mashoko aGabrieri seechokwadi, nokuti aiva mhandara yaiva nokutenda kwakakura. Zvisinei, kutenda ikoko kwakanga kusiri kwemunhu aingobvuma zvose zvaanenge audzwa. Sezvinongoita munhu wose anofunga, Mariya aida uchapupu hwokuti ave nokutenda. Gabrieri akanga akagadzirira kuwedzera humwe uchapupu pane hwaitova naMariya. Gabrieri akaudza Mariya nezvehama yake yakanga yakwegura Erizabheti, aizivikanwa kubvira kare kuti akanga asingabereki. Mwari akanga aita chishamiso chokuti Erizabheti abate pamuviri!
10. Kunyange zvazvo yaiva ropafadzo kubereka Mwanakomana waMwari, nei izvi zvakanga zvisiri nyore kuna Mariya?
10 Mariya aizoitei? Akanga atarisana neropafadzo yacho uye aine uchapupu hwokuti Mwari aizoita zvose zvakanga zvataurwa naGabrieri. Kunyange zvazvo yaiva ropafadzo kubereka mwanakomana waMwari, izvi zvakanga zvisiri nyore kuna Mariya. Chimwe chikonzero ndechokuti aifanira kufunga nezvevimbiso yekuroorana naJosefa. Vaizoroorana here Josefa paaizoziva kuti aiva nepamuviri? Chimwezve ndechokuti, ropafadzo yacho pachayo ingangodaro yaiita sebasa rakaoma. Aifanira kutakura upenyu hwechisikwa chinokosha kupfuura zvisikwa zvose zvaMwari, Mwanakomana wake waanoda! Aizofanira kumutarisira paaiva kacheche uye kumudzivirira munyika yakaipa. Chokwadi raiva basa guru!
11, 12. (a) Kunyange varume vakasimba uye vakatendeka dzimwe nguva vaiita sei pavaipiwa mabasa akaoma naMwari? (b) Mariya akaratidzei nezvake nemapinduriro aakaita Gabrieri?
11 Bhaibheri rinoratidza kuti kunyange varume vakasimba uye vakatendeka dzimwe nguva vaizeza kubvuma mabasa akaoma avaipiwa naMwari. Mosesi akati aisagona kutaura zvakanaka zvokuva mutauriri waMwari. (Eks. 4:10) Jeremiya akaramba basa racho achiti ‘aingovawo hake mukomana,’ munhu muduku zvikuru kuti aite basa raakanga apiwa naMwari. (Jer. 1:6) Uye Jona akatiza basa rake! (Jona 1:3) Zvakadini naMariya?
12 Kunyange nanhasi vanhu vakawanda vanoziva mhinduro yake inoratidza kuzvininipisa uye kuteerera. Akati kuna Gabrieri: “Tarirai! Murandasikana waJehovha! Ngazviitike kwandiri maererano nezvamazivisa.” (Ruka 1:38) Murandasikana aiva mushandi akaderera zvikuru kupfuura vamwe vose; upenyu hwake hwaiva mumaoko atenzi wake. Ndiwo manzwiro aiita Mariya nezvaTenzi wake, Jehovha. Aiziva kuti akanga akachengeteka mumaoko aMwari, kuti Mwari akavimbika kuvanhu vakavimbika kwaari uye kuti aizomukomborera sezvaaizoita zvose zvaaigona pabasa iri raainge apiwa.—Pis. 18:25.
Mariya aiziva kuti akanga akachengeteka mumaoko aMwari wake akavimbika, Jehovha
13. Kana kuita zvatinoudzwa naMwari kuchiita sekwakaoma kana kuti kunyange sekusingabviri, tingabatsirwa sei nemuenzaniso waMariya?
13 Dzimwe nguva Mwari anotikumbira kuita zvinhu zvatingaona sezvakaoma kunyange sezvisingabviri. Zvisinei, muShoko rake anotipa zvikonzero zvakakwana zvokuti tivimbe naye, tizviise mumaoko ake sezvakaitwa naMariya. (Zvir. 3:5, 6) Tichadaro here? Kana tikadaro achatikomborera achitipa zvikonzero zvokuti tive nekutenda kwakatosimba maari.
14, 15. (a) Jehovha akakomborera sei Mariya paakashanyira Erizabheti naZekariya? (b) Mashoko akataurwa naMariya ari pana Ruka 1:46-55 anoratidzei nezvake?
14 Mashoko akataurwa naGabrieri nezvaErizabheti aireva zvakawanda kuna Mariya. Pavakadzi vose vaiva panyika, ndiani aikwanisa kunzwisisa mamiriro ezvinhu aMariya kupfuura Erizabheti? Mariya akabva achimbidza kuenda kunyika yemakomo yaJudha, rwendo rwaitora mazuva anenge matatu kana mana. Paaipinda mumusha waErizabheti naZekariya mupristi, Jehovha akakomborera Mariya nohumwe uchapupu hwakasimba kuti asimbise kutenda kwake. Erizabheti akanzwa kukwazisa kwaMariya uye akabva anzwa mwana aiva mudumbu make achikwakuka nomufaro. Akazadzwa nomudzimu mutsvene ndokutaura nezvaMariya sa“amai vaShe wangu.” Mwari akanga aratidza Erizabheti kuti mwanakomana waMariya aizova Ishe wake, Mesiya. Uyezve, akafuridzirwa kuti arumbidze Mariya nezvekuteerera kwake nokuvimbika, achiti: “Anofarawo iye akatenda.” (Ruka 1:39-45) Chokwadi, zvose zvakanga zvavimbiswa Mariya naJehovha zvaizoitika!
Ushamwari hwaMariya naErizabheti hwaiva chikomborero kwavari vose
15 Mariya akabva ataurawo. Mashoko ake akanyatsochengetedzwa muShoko raMwari. Pana Ruka 1:46-55 tinowana mashoko aMariya akawanda kupfuura ese muBhaibheri, uye anoratidza zvakawanda nezvake. (Verenga) Mashoko ake anoratidza kuonga sezvaanorumbidza Jehovha kuti akanga amukomborera neropafadzo yekuva amai vaMesiya. Anoratidza kuti aiva nokutenda kwakasimba, sezvaanotaura nezvaJehovha kuti anoderedza vanozvikudza nevane simba uye achibatsira vakaderera nevarombo vanoda kumushumira. Anoratidzawo zivo yaaiva nayo. Zvinofungidzirwa kuti akataura nezvepfungwa dzinopfuura 20 dziri muMagwaro echiHebheru! *
16, 17. (a) Mariya nemwanakomana wake vakaratidza sei unhu hwatinofanira kutevedzera? (b) Kushanyirwa kwakaita Erizabheti naMariya kunotiyeuchidza nezvechikomborero chipi?
16 Zviri pachena kuti Mariya aifungisisa nezveShoko raMwari. Kunyange zvakadaro, akaramba achizvininipisa, achisarudza kutaura zvaiva muMagwaro pane kuti ataure zvemusoro wake. Mwanakomana aikura mudumbu make rimwe zuva aizoratidza kuzvininipisa kwakadaro, achiti: “Zvandinodzidzisa hazvisi zvangu, asi ndezvaiye akandituma.” (Joh. 7:16) Tingaita zvakanaka kuzvibvunza kuti: ‘Ndinoremekedza Shoko raMwari saizvozvo here? Kana kuti ndinoona zviri nani kuomerera papfungwa nedzidziso dzangu pachangu here?’ Zvechokwadi Mariya aiva nemafungiro akanaka.
17 Mariya akagara naErizabheti kwemwedzi inenge mitatu, uye hapana mubvunzo kuti vaikurudzirana zvikuru. (Ruka 1:56) Nhoroondo yeBhaibheri yekushanya uku inotiyeuchidza kuti kushamwaridzana kunogona kuva chikomborero chaicho. Kana tikatsvaka shamwari dzinonyatsoda Mwari wedu Jehovha, tinototi tikure mune zvokunamata toswedera pedyo naye. (Zvir. 13:20) Zvisinei, yakazosvika nguva yokuti Mariya adzokere kumba. Josefa aizotii paaizoziva kuti Mariya aiva nepamuviri?
18. Mariya akaudza Josefa kuti kudii, uye Josefa akaita sei?
18 Mariya haana kumirira kuti pamuviri pake pasvike pakuonekwa asati audza Josefa nezvapo. Hapana mubvunzo kuti aitofanira kutaura naJosefa. Asati ataura naJosefa, angangodaro akanetseka kuti uyu murume kwaye aitya Mwari, aizoita sei kana amuudza. Kunyange zvakadaro, akaenda kwaari ndokumuudza zvose zvakanga zvaitika kwaari. Sezvaungafungidzira, Josefa akanetseka zvikuru. Aida kubvuma zvaitaurwa nemusikana uyu waaida asi zvinoita sekuti akanga asina kuvimbika kwaari. Bhaibheri haritauri kuti Josefa akafungei kana kuti akati kudii. Asi rinoti akasarudza kumuramba, nokuti panguva iyoyo, vanhu vainge vavimbisana kuroorana vaionekwa sevakatoroorana. Zvisinei, akanga asingadi kumuita chiseko chenyika, saka akasarudza kumuramba pachivande. (Mat. 1:18, 19) Zvinofanira kunge zvakarwadza Mariya kuona murume uyu aiva nemutsa achishupika nezvemamiriro ezvinhu aya akanga asati amboitika. Asi Mariya haana kupa Josefa mhosva yekusabvuma zvaaitaura.
19. Jehovha akabatsira sei Josefa kuti aite zvakarurama?
19 Jehovha akabatsira Josefa nemutsa kuti aite zvakarurama. Josefa paairota, ngirozi yaMwari yakamuudza kuti pamuviri paiva naMariya chaiva chishamiso chaicho. Izvozvo zvinofanira kunge zvakamusunungura! Iye zvino Josefa akaita zvakanga zvamboitwa naMariya pakutanga—Josefa akaita maererano nokutungamirira kwaJehovha. Akatora Mariya kuti ave mudzimai wake, uye akagadzirira kuita basa iri raikosha rokutarisira Mwanakomana waJehovha.—Mat. 1:20-24.
20, 21. Vanhu vakaroorana nevaya vari kufunga zvekuroorana vangadzidzei pana Mariya naJosefa?
20 Vanhu vakaroorana nevaya vari kufunga zvekuroorana vanofanira kudzidza kune murume nemudzimai vechiduku ava vakararama makore 2 000 akapfuura. Josefa paaiona mudzimai wake wechiduku achizadzisa zvaaitarisirwa kuita saamai, zvechokwadi akafara kuti ngirozi yaJehovha yakanga yamutungamirira. Josefa anofanira kunge akaona kukosha kwokuvimba naJehovha pakuita zvisarudzo zvikuru. (Pis. 37:5; Zvir. 18:13) Hapana mubvunzo kuti airamba akangwarira uye achiratidza mutsa pakuita zvisarudzo semusoro wemhuri.
21 Uyewo, tingadzidzei pakuda kwaiita Mariya kuti aroorwe naJosefa? Kunyange zvazvo pakutanga Josefa angave akaona zvakanga zvataurwa naMariya zvakaoma kunzwisisa, Mariya akamumirira kuti asarudze kuti zvinhu zvofambiswa sei, nekuti ndiye murume aizova musoro wemba. Zvechokwadi ichocho chaiva chidzidzo chakanaka kuna Mariya, sezvazvakaita kuvakadzi vechiKristu nhasi. Pakupedzisira, zviitiko izvi zvingangove zvakadzidzisa Josefa naMariya zvakawanda nezvekukosha kwekubudirana pachena pakukurukurirana.—Verenga Zvirevo 15:22.
22. Ndeipi yaiva faundesheni yewanano yaJosefa naMariya uye chii chavaitarisira?
22 Zvechokwadi murume nemudzimai ivavo vechiduku vakatanga wanano yavo pafaundesheni yakanaka kupfuura dzose. Vose vaida Jehovha Mwari kupfuura zvimwe zvose uye vaida chaizvo kumufadza sevabereki vane hanya uye vanoziva zvavanoita. Chokwadi, vaizovawo nezvikomborero zvikuru uyewo matambudziko akakura. Vaitarisira kuzorera Jesu, uyo aizokura kuva munhu mukuru kupfuura vose vati vamborarama panyika.
^ ndima 15 Zvinoita sekuti Mariya akadzokorora mashoko emukadzi akatendeka Hana, uyo Jehovha akanga akomborerawo nemwana.—Ona bhokisi rakanzi, “Minyengetero Miviri Inoshamisa,” riri muChitsauko 6.
Tingadzidzei pana Mariya nezvokuzvininipisa?
Sei kuteerera kwaMariya kwaishamisa?
Mariya akasimbisa kutenda kwake munzira dzipi?
Ungada kutevedzera kutenda kwaMariya munzira dzipi?